धार्मिक द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने खेल जारी - Jhilko
६ भदौ,२०७६ 252 0
काठमाडौँ । प्रतिगामी तत्वहरु अहिले प्राप्त उपलब्धि र परिवर्तनलाई उल्ट्याउन अनेक हत्कण्डा अपनाउन क्रियाशील छन् भन्ने पहिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ । उनीहरु त्यसका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि गिर्न तयार रहेछन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।
गत भदौ १२ गते सुर्खेतमा भएको गौहत्या त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । देशलाई धार्मिक द्वन्द्वमा धकेल्ने गुरुयोजना अनुसार सो गौहत्या गराइएको थियो । गाई मारिएको घटनाबाट हिन्दुहरु उत्तेजित बनाउने अस्थिरता निम्त्याउने उनीहरुको कुत्सित मनसाय त असफल भएको छ । उल्टै आफूले थापेको जालोमा प्रतिगामी तत्वहरु आफैं परेका छन् ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले सो घटनामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणातिर तीर सोझिएको छ । राप्रपाका नेता समेत रहेका उनले पार्टीकै योजनामा सो कार्य गरेका वा व्यक्तिगत लफडामा फसेका हुन् त्यो त खुल्दै जाला तर यसलाई संयोग मान्न सकिने आधार भने छैन । गाई चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेको राप्रपाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र देशमा अस्थिरता निम्ताउनका लागि गौ हत्या जस्तो घृणित कार्य गरेको आरोप सो पार्टीमाथि लागेको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले काञ्जी हाउसमा राखेका तीन सय ७० गाईगोरु, बाच्छाबाच्छीहरु सुर्खेत हुँदै दैलेखको श्रीस्थान लैजाने भनिए पनि भदौ १२ गते गते राति सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १४ कटकुवास्थित दैलेख सुर्खेत सड्क खण्डको जंगलमा सडकदेखि तल ब्युरेनी खोलामा तीन दर्जन गाईगोरु मृत फेला परेका थिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले समेत यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएका छन् । घटना लगत्तै सत्य तथ्य बुझी के, कुन व्यक्ति, पदाधिकारी एवम् निकायको के, कस्तो संलग्नता रहेको र दोषीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको सिफारिश गर्ने कार्यादेशसहित कार्य प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गृह मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी चार सदस्यीय छानविन समिति गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छ ।
सो टोलीले छानविनको क्रममा घटनास्थल पुगी प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रुप दिँदैछ । गृहस्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसान्धानले गाईगोरुको स्वाभाविक नभई हत्या नै गरेको संकेत गरेको छ । घटनामा नेपालगञ्जका मेयरमात्रै होइन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत गम्भीर लापर्वाही गरेको देखिएको छ । त्यस्तै हतार–हतार गाई मागेको पत्र लेख्ने जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख र उपप्रमुख समेत तानिने देखिएको छ । छानविन समितिले पत्र , दर्ता र चलानी नम्बरमा कैफियत भेटाइ सकेको गृहस्रोतले जानकारी दियो ।
सुर्खेतको गौहत्या काण्डमात्रै होइन पत्रकार रवि लामिछानको घटनामा समेत राप्रपाले चलखेल तीव्र पारेको थियो । राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले सो घटनामा चितवनमा प्रचण्ड विरुद्ध माहौल सिर्जना गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरे । चितवनमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्नुले राप्रपा र राजावादीहरुको भूमिका सहजै चाल पाउन सकिन्छ । चितवनमा प्रचण्ड र समग्र देशमा नेकपाविरुद्ध माहौल बनाउन रवि लामिछानको समर्थकका नाममा राप्रपाले भूमिका खेल्यो । त्यसमा पछाडिबाट धाप दिने काम नेपाली काँग्रेसले गर्यो ।
यस्तै सलबलाहट कैलालीको टीकापुरमा समेत यसै महिना भयो । त्यहाँका थारु समुदायले पहाडे समुदायसँग भातृत्व बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले थारु सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । तर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका संघीय समादवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि थारुहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने भन्दै उक्साउने काम गरे । भातृत्व र सहअस्तित्वका लागि गरिएको कार्यक्रममा डा. भट्टराईले गरेको भाषणबाट स्थानीय थारु समुदाय नै चिढिए ।
यसरी कहिले गौ हत्या गरेर धार्मिक लडाई निम्त्याउने, कहिले रवि लामिछानका समर्थकका नाममा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै अनास्था जगाउने तथा कहिले शान्त टीकापुरमा फेरि जातीय द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्ने र देशैभर त्यसलाई फैलाउने कुत्सित मनसायमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरु न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको देखिन्छ । यसलाई चिर्ने र असफल पार्ने गरी नेकपा र वर्तमान सरकारले ठोस योजना बनाउन नसकेमा कुनै पनि दिन जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक द्वन्द्वमा मुलुक फस्नेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
साँच्चै अनुकरणीय नेता बने वादल
भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई युद्ध उक्साउन खोजेको...
४ श्रावण,२०७६0181
त्यतिबेला दर्शकदीर्घामा बसेकी पाकिस्तान-अमेरिकी महिला आयेशा मलिकले उनलाई प्रश्न...
सैनामैनामा क्रिकेट एकेडेमी बन्दै
५ जेठ,२०७६0203
पर्रोहा माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सैनामैना नगरपालिका–४ स्थित १६ कट्ठा...
६ असार,२०७६0165
दैनिक पाँच हजार स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ
१ पुष,२०७६041
छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन केही दिनभित्रै दैनिक तीन ‘सिफ्ट’ मा अनुमतिपत्र छापिने भएको...